Ellicott Dredges For Marsh & Wetland Restoration, Ilaalinta Xeebaha
Tayada iyo siyaasada Deegaanka
Dooxooyinka & Qalabka
Kala Bixinta Cutubka Dhirta ee La Qaadi Karo
Kala sarreynta Jaranjarooyinka
Qeybaha Kala Duwan & Adeegga
Tilmaamo Bilaash ah: + 1 888-870-3005 410-625-0808 1611 Bush Street, Baltimore, MD 21230, USA sales@dredge.com
Dayactirka dhulalka qoyan, xeebta, iyo dhul-mareenka ayaa muhiim u noqon kara ilaalinta deegaanadan dabiiciga ah ee bacrinsan. Qodaalka hagaajinta deegaanka ayaa ka saaraya marinnada biyaha ee dhismay iyo wasakhda wasakhaysan ee u oggolaanaya qulqulka biyaha macaan inay keenaan nafaqooyin isla markaana qashinka ka soo saaraan.
Horumarinta deegaanka ee laga heli karo qodista waxay si togan u saameyn kartaa caafimaadka aadanaha iyo sidoo kale xayawaanka iyo dhirta ku nool aagagga ku xeeran. Qodista bey'adda mararka qaarkood waxay u baahan tahay saxnaan heer sare ah si loo hubiyo ujeeddooyinka mashruuca iyadoo la ilaalinayo jawiga nabdoon.
Taxanaha Ellicott 370HP Dragon® dredge iyo Taxanaha 670 Dragon® dredge waa kuwo la qaadan karo oo la jaan qaadi karo oo si fiican uga shaqeeya cidhiidhi iyo sidoo kale mashaariic ballaadhan oo ballaadhan .. Taxanaha Ellicott 360SL Swinging Dragon® dredge iyo Taxanaha 460SLM Swinging Dragon® dredge waa rogrogmadaan jaranjarooyinka jaranjarada ee sida ugu fiican uga shaqeeya aagagga cidhiidhiga ah iyo halka looga baahan yahay qoditaanka saxda ah. Dhammaan moodelladan waxaa lagu dhisay dhufto isku-dhafan oo ka dhigaysa kuwo ku habboon inta badan soo celinta dhirta qoyan iyo mashaariicda hagaajinta deegaanka.
Nala Soo Xiriir Wax Ku Saabsan Baahidaada Qoditaanka
Taxanaha 370HP Dragon® Dredge
Xaashi gaar ahEeg Video
Taxanaha 670 Dragon® Dredge
Taxanaha 360SL Dragon® Dredge
Taxanaha 460SLM Swinging Dragon® Dredge
Soo Celinta Marsh Iyo Wetland
Mashaariicda dib u soo celinta Marsh iyo Wetland waxay faa'iido u leeyihiin madadaalada maxaliga ah iyo degaanada duurjoogta dabiiciga ah. Socodka dabiiciga ah ee walxaha iyo duufaanka xilliyada xilliyeed waxay xaddidayaan marinnada siiya biyo nadiif ah dhulka qoyan ama balliyada. Qodida wadiiqooyinkaan waxay u oggolaanaysaa biyaha inay ku wareegaan gudaha iyo dibedda, iyagoo keenaya nafaqooyin isla markaana wasakhaynaya qashinka.
Qalabkayaga qashin-qubka waxaa loo isticmaalaa codsiyo kala duwan oo dhul-beereed ah oo ay ku jiraan dib-u-soo-celinta dhul-daaqsimeedka, qulqulka qoto-dheer ee abuurista dhul-daaqsimeedka, ka-saarista dhirta, iyo ka-saarista maado sun ah oo siinaysa nafaqooyinka dhul-daaqsimeedka. Nooca Ellicott® Swinging Ladder Series, wuxuu ku habboon yahay mashruucyada dib u soo celinta dhulka qoyan wuxuuna siiyaa qandaraasleyda iyo hay'adaha dowladda fursado badan oo ay ka dooran karaan marka wax laga qabanayo deegaannada qalalan ee qalalan ee u baahan in la gooyo.
Waxbadan ka baro Wetland iyo Marsh Restoration
Ilaalinta xeebaha waxay ka hortegi kartaa daadadka iyo nabaad guurka dhulka. Difaaca noocan ah badiyaa wuxuu ka kooban yahay xeebo nafaqo leh iyo dhismayaasha boodhka, labadaba howlaha waxay u baahan yihiin soo kabashada iyo rarida xaddiga ciid badan. Saamaynta heerarka bada ee adduunka ee kor u kaca ayaa sare u qaaday wacyiga sida aagagga xeebaha u nugul ay dabiicadda hooyada u yihiin.
Astaamaha cimilada ee sii kordheysa ee aan la saadaalin karin waxay saameyn xoogan ku yeesheen gobolada si dabiici ah ugu nugul nabaad guurka iyo daadadka. Duruufahaas waxay keeneen dareen deg-deg ah in la dhiso aagag xeebeed oo hagaagsan oo ka kooban mashruucyo baaxad weyn sida Fuller Street Beach oo ku taal Edgartown, Massachusetts (USA).
Ku-soo-buuxinta xeebta iyo kor u qaadista xeebta ayaa caado ka sii kordheysa adduunka oo dhan. Dhammaan mashaariicdan waxaa lagu suurta galiyay istiraatiijiyado qodaya oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo kaabayaasha iyo aadanaha ka hortagga halista sare u kaca heerarka badda iyo daadadka. Ellicott Dredges waxay leedahay dhowr nooc oo dooxooyin ah oo si gaar ah loogu talagalay mashaariicda la xiriira ilaalinta xeebta.
Enbridge waxay tirtiraysaa nadiifinta saliida Kalamazoo River iyo nadiifinta
Sida Looga takhaluso Muck
Hal-abuurka 'Ellicott® Brand Dredge' wuxuu horseed u leeyahay Dib-u-soo celinta Gacanka Mexico Marsh Dib-u-soo-nooleynta BP ee Louisiana
Qalabka Qashin-qaray oo laga buuxiyey Tuubbooyinka Wejiga Sanjabiil San Antonio River
Macdanta / Qashin-qubka Macdanta / Qodaxa
Dekedaha, Dekedaha, & Qodista Wadada Biyaha
Qulqulka Xeebta ee Soo Celinta
Dam-damis & Burbur
Ellicott Dredges waa hogaamiyaha warshadaha ee dredges tayo leh. Magacayaga sumadda ahi wuxuu ku xidhanyahay hal-abuurnimada, waxsoosaarka, iyo isku halaynta.
Ku saabsan Ellicott
Siyaasadda Tayada & Deegaanka
Tilmaamo Bilaash ah: + 1 888-870-3005
Tababbarka Howlqabadka Dredge
Xiriirinta Kala Duwan
Daraasad Dacwadeed oo Bilaabantay
Soo celinta Xeebaha
Ciid Macdanta iyo Quruxda
Dekedaha, Dekadaha & Wadooyinka Biyaha
Xuquuqda daabacaadda 2019 Ellicott, LLC, - Xuquuqda oo dhan waa la keydiyay. Dib u eeg Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Bog internet ah Qormada iyo Drio.